Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » India buliri ikike ụgbọ elu ya na 85% nke ọkwa pre-COVID
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Gọọmentị India na-eme ka mmachibido oge COVID dị na ndị na-ebu ụgbọ elu ụlọ nke mba ahụ kwụsịlata.
Ugbu a, a ga-ahapụ ndị ụgbọ elu India ka ha rụọ ọrụ na pasent 85 nke ikike ọrịa tupu ọrịa amalite.
A ga -ahapụkwa ndị ụgbọ elu ụgbọ elu India ka ha debe ụgwọ nke ha maka tiketi gafere ụbọchị iri na ise nke ụbọchị ntinye akwụkwọ.
Ministri na-ahụ maka ụgbọ elu nke India welitere ikike ikuku ụgbọ elu ụlọ taa, na-enyere ndị ụgbọ elu India aka ịrụ ọrụ na 85% nke ikike tupu COVID-19 karịa 72.5% ugbu a.
Ndị ikike ụgbọ elu ndị India gbanwekwara usoro okpu ọnụ ahịa, na -enye ohere ka ndị na -anya ụgbọ elu debe ọnụ ahịa nke ha maka tiketi gafere ụbọchị iri na ise nke ụbọchị ntinye akwụkwọ.
Ruo mgbanwe nke taa, okpu ọnụ ahịa dị na tiketi ruo ụbọchị 30 site na ụbọchị ntinye akwụkwọ.
Mgbanwe ndị ahụ mara ọkwa Ministry of Civil Aviation ga -ekwe ka ndị na -ebu ụgbọ elu India rụọ ụgbọ elu karịa ma kwalite ibu ndị njem na mmalite nke mmemme mmemme mba n'ọnwa na -abịa.
Ụgbọ elu ụgbọ elu nke India amụbaala 34% ruo nde 6.7 n'ọnwa Ọgọstụ n'usoro n'usoro na -abawanye n'ike ruo 72.5%.
Mmụba ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa yana ihe nlele COVID-19 dị jụụ enyerela aka. Ọnụnọ oche n'obere ụlọ ọrụ rịrị elu karịa 70% n'ọnwa gara aga.
Ezumike nke ike ụgbọ elu na ibelata mmachi ọnụahịa na -abịa mgbe ọtụtụ mkparịta ụka dị n'etiti ndị ọrụ ụgbọ elu India na ndị isi ụlọ ọrụ ụgbọ elu India.
Ntughari ikike ikike na ụgwọ ụgbọ mmiri kewara ụlọ ọrụ ahụ nke ọma na Ronojoy Dutta, onye isi ụlọ ọrụ ụgbọ elu kacha ukwuu na India indigo, na-akpọ ka ewepu nnyonye anya gọọmentị maka ọnụ ahịa na ikike, na-ekwu na nke a na-egbochi ndị ụgbọ elu ime mkpebi ndị dabere na azụmahịa.
Ndị na -arụ ọdụ ụgbọ elu mba kachasị ukwuu - Delhi, Mumbai, Bangalore - arịọla gọọmentị ka ha kwụsị okpu na ikike na ọnụ ahịa n'ihi na nke a na -egbochi nlọghachi nke ndị njem ma na -emebi nnukwu ego nke ọdụ ụgbọ elu India nke nwere nke ukwuu.